SparkleShare: waa qalab loogu talagalay iskudhafka faylasha daruurta | Laga soo bilaabo Linux
SparkleShare: qalab loogu talagalay iskudhafka faylka daruurta
SparkleShare waa qalab fayl isku xir taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay isku dubbaridaan oo ay wadaagaan faylasha qoraalka kala duwan, dukumiintiyada xafiiska iyo noocyada kale ee xogta yar ee adeegsadayaasha LAN ama Internetka qaab DropBox ah.
La wadaag Sparkle waa bilaash waxayna ku shaqaysaa tiro badan oo ah qaybinta LinuxSida caadiga ah, waxay u isticmaashaa Git sidii gadaal keyd ah.
Faa'iidada is-martigelinta ayaa ah in adeegsadaha uu ku haysto xakameyn buuxda xogtooda. Xaaladda ugu fudud, is-martigelinta kaliya waxay u baahan tahay SSH iyo Git.
Nidaamka martigelinta SparkleShare waa mid aan dadaal lahayn in la qaabeeyo, iyada oo ay ugu wacan tahay qalabkeeda "Dazzle". Dazzle waa qoraal qolof ah oo ay isticmaaleyaashu u adeegsan karaan inay ku maareystaan ​​falalka SparkleShare, ku xirmaan macaamiisha, iyo si ka dhakhso badan.
1 Sidee loo rakibaa SparkleShare qaybaha kala duwan ee Linux?
1.1 Ku rakibidda macmiilka 'Sparkleshare'
1.2 Dejinta SparkleShare
Sidee loo rakibaa SparkleShare qaybaha kala duwan ee Linux?
Si aan ugu rakibno qalabkan iskudhafka feylka cajiibka ah nidaamkeena ama serverka, waxaan adeegsan doonaa qoraalka Dazzle.
Qoraalka Dazzle uma baahna wax hal mar ah oo la dejiyo si loo isticmaalo ama loo rakiboSi fudud u soo degso qoraalka galka guriga ee serverka Linux ama desktop oo martigalin doona faylasha.
Arrintan awgeed terminal waxaan ku qoreynaa amarka soo socda:
Soo dejinta qoraalka horay loo sameeyay waxaan cusbooneysiineynaa rukhsadaha qoraalka 'Dazzle', si ay si sax ah ugu isticmaali karaan.
Iyadoo aan la haysan rukhsad sax ah, waxay u egtahay in qoraalka uusan si sax ah u socon doonin, tanna waxaan ku qori karnaa barta:
sudo chmod + x dazzle.sh
Kadib dejinta rukhsadaha, socodsiiso amarka dejinta Dazzle.
Amarka qaabeynta wuxuu si otomaatig ah u soo saari doonaa feylasha qaabeynta kala duwan iyo sidoo kale isbeddelada kale ee nidaamka ee lagama maarmaanka u ah socodsiinta nidaamka Sparkleshare.
sh dazzle.sh setup
Waa inaad ogaataa in martida faylka Sparkleshare ay la shaqeeyaan faylal yar yar si ka fiican sida faylasha qoraalka, sawirada ama dukumiintiyo kale oo yaryar.
Isku day inaad tan ugu isticmaasho faylasha waaweyn laguma talinayomaadaama tani aysan ahayn waxa loogu talagalay barnaamijka.
Si loo abuuro wadaag cusub, kaliya socodso amarka soo socda
sh dazzle.sh create recuerso_a_compartir
Qoraalka Dazzle-ka, markii la dhammeeyo, wuxuu daabici doonaa faahfaahinta xiriirka fog ee qaybtaada cusub.
Waa inay nuqul ka sameeyaan macluumaadkan la wadaago oo ay ku keydiyaan fayl qoraal ah.
Ku rakibidda macmiilka 'Sparkleshare'
Hadda oo aad haysato server-ka Sparkleshare oo socda, Waqtiga si loo habeeyo dhinaca macmiilka. Nasiib wanaag, Sparkleshare waxaa laga heli karaa dhammaan nidaamyada hawlgalka waaweyn.
Si aad ugu rakibto Sparkleshare Linux, fur terminal oo raac tilmaamaha kuxiran qeybintaada Linux.
Hadday yihiin adeegsadayaasha Debian, Ubuntu, Linux Mint, Elementary OS ama nidaam kasta oo ka soo jeeda kuwan, waxaad ku rakibi kartaa qalabkan amarka soo socda:
Marka laga hadlayo kuwa Isticmaalayaasha Arch Linux, Manjaro, Antergos ama nidaam kasta oo soosaara Arch Linux. Waa lagama maarmaan in la helo keydka "Community" oo karti u leh faylkaaga pacman.conf.
Si loo rakibo arjiga, waa inaad qortaa:
sudo pacman -S sparkleshare
Halka kuwa ay yihiin CentOS, RHEL, Fedora, iyo isticmaaleyaasha nidaamka ka soo jeeda kuwan waxay ku rakibi karaan arjiga amarka soo socda:
sudo dnf install sparkleshare -y
Haddii aad tahay Isticmaal nooc kasta oo OpenSUSE ah, si fudud ugu rakib amarka soo socda:
sudo zypper in sparkleshare
Soosaarayaasha Sparkleshare waxay leedahay nooc Flatpak ah oo la heli karo si loo rakibo, tan awgeed waxay kaliya ku fulinayaan amarka soo socda:
flatpak remote-add flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
flatpak install flathub org.sparkleshare.SparkleShare
Si aad ugu xirnaato SparkleShare iskiis u martigelisay, marka hore waa inay ku daraan aqoonsiga server-kooda. Ku bilow macaamilka 'SparkleShare' oo midig-guji dusha qashinka nidaamka kombiyuutarkaaga.
Meesha midig-gujiska ah, ka hel "Aqoonsiga Macmiilka" oo dhagsii badhanka "nuqul kabadhka".
Iyada oo la helayo xididka, socodsiinta qoraalka 'Dazzle' oo socodsiiya amarka soo socda:
sh dazzle.sh link
Isla markiiba ka dib Waa inay aqoonsiga dhigaan waana intaas.
Marka martida iyo macmiilku isku xirmaan, mar kale guji astaanta 'SparkleShare' ee systray ka dibna dooro "ku dar mashruuca martigelinta", halkan waxaad u baahan doontaa inaad gasho faahfaahinta isku xirka qaybtaada si aad marin ugu hesho.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » SparkleShare: qalab loogu talagalay iskudhafka faylka daruurta
Sidee loo bakteeriyaa qaabeynta LXDE?
Sidee loo ordaa tijaabada xawaaraha internetka ee ka socota terminaalka?